कै , दी मृ , त्यु प्रकरण : कारागार भन्छ, ‘चो , ट , प , ट , क छैन, शं , का लागे पो , ष्ट , मा , र्ट , म गराउँ’ श्रीमतीको रुवाबासी, पुरा पढ्नुहोस – Dainik Sangalo
काठमाडौं । केन्द्रीय कारागार सुन्धाराबाट उपचारका लागि वीर अस्पताल ल्याइएका राजलखन जैसवालको अस्पताल पुग्दा नै मृत्यु भइसकेको वीर अस्पतालले प्रष्ट पारेको छ ।
असोज ३ गते राती उपचारका लागि ल्याइएको उनको आकस्मिक कक्षमा ल्याउँदा नै मृत्यु भएको अस्पतालले बताएको छ । मृत्युपछि कोरोना परीक्षण गराउँदा सोमबार पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको वीर अस्पतालका निर्देश डाक्टर केदार सेन्चुरीले जानकारी दिए ।
तर, मृतकका परिवारले भने जैसवालको ह , त्या भएको दा , वी गरेको छ । जैसवालको मृत्युप्रति शं , का लागे पो , ष्ट , मा , र्ट , म गर्न सकिने डा. सेन्चुरीले बताए ।
यता केन्द्रीय कारागारका जेलर लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले जैसवालमा अचानक श्वासप्रश्वासमा समस्या देखेपछि कारागारभित्र भएको अस्पतालमा लगिएको बताए । त्यहाँबाट वीर लान भनेपछि वीर अस्पताल पठाएको उनले बताए ।
मृतकको शरीरमा कुनै चो , ट , प , ट , क नभएको पनि उनले दावी गरे । शं , का लागे सिसिटिभी फुटेज हेर्न सकिने जेलर बास्कोटाको भनाई छ ।
तर मृतकका परिवार र आफन्तले भने उनको ह , त्या भएको दावी गर्दै वीर अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले जैसवालमाथि गम्भीर कु , ट , पि , ट भएको र घाँ , टी रे , टि , ए , को पाइएको भन्दै ह , त्या नै भएको दावी गरेका छन् ।
वीर अस्पताल परिसरमा भएको प्रदर्शनको विषयमा महानगरीय प्रहरी परिसरका एसएसपी श्याम ज्ञवालीले भने सुरक्षा दिइरहेको बताए । उनले भने, “मृतकका आफन्तले शव हेर्ने भनेका छन् । परिवार र अस्पतालबीचको विवाद उनीहरुले नै मिलाउँछन् ।
Prevलामो दूरीको यात्रामा फेरि भर्खरै लगाइयो यी येस्ता नयाँ नियमहरु ; सबैले जान्नै पर्ने !
Nextकेहीबेर अघि मात्रै धनगढीबाट बाहिरिएकाे यस्ताे साेच्दै नसाेचेकाे खबरले फेरी सबैकाे ध्यान..
एउटा सपना थियो धेरै धन कमाउने,तर उनको सपना अधरै भिम बहादुरको उपचार नपाएर मलेसियामा नि’धन